Liverpool oo garoonkeeda Anfield guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Aston Villa… +SAWIRRO – Gool FM
(Liverpool) 11 Dis 2021. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Aston Villa, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-0, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Liverpool iyo Aston Villa ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 67-ad kooxda Liverpool ayaa lagu abaal mariyay rigoore waxaana gool ka dhigay gooldhaliyahooda reer Masar ee Mohamed Salah, ciyaarta ayaa waxay sidaas ku noqotay 1-0 ay ku hoggaamineysay Reds.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 1-0 ay Liverpool kaga adkaatay kooxda Aston Villa oo marti u ahayd, Reds ayaa waxay wali ku jirtaa kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna leedahay 35 dhibcood.
Arsenal oo saddexda dhibcood si sahlan kaga qaadatay kooxda Southampton oo marti ugu ahayd garoonka Emirates… +SAWIRRO